musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » Kusungwa Kwemoyo: Kuvandudza Kupona Matengo
MuSingapore, 1 muvatatu vanorwara nemoyo vanogona kusangana nechiitiko chemoyo chinowanzoitika. Kunyangwe kudzoreredzwa kwemoyo ndiyo hwaro hwekudzivirira kwechipiri, chete 3% kusvika 6% yevarwere vanokodzera nhasi vanopinda zvirongwa zvekuvandudza moyo.
Philips Foundation nesangano resocial service reSingapore Heart Foundation (SHF) nhasi yazivisa mubatanidzwa wekuvandudza zviitiko zvemoyo munharaunda nekuwedzera kuwaniswa kwehutano hwemhando yepamusoro. Chirongwa chegore rose chekubhadhara mari ichangodaidzwa kunzi "SHF - Philips Foundation Heart Wellness Center" chine chinangwa chekudzikisa huwandu hwevanhu vanofa nechirwere chemoyo ne50% (zvichienzaniswa nevarwere vasingaite) uye kuderedza njodzi yemunhu yekuchipatara. kuverengerwa ne25%.
SHF - Philips Foundation Heart Wellness Center, iyo zvirongwa zvekuvandudza uye mashandiro ayo zvichange zvichitsigirwa nePhilips Foundation mugore rinouya, ichagadzirisa dambudziko iri uye ichatungamira kutora chikamu kwepamusoro muzvirongwa zvekuvandudza nekugonesa kupinda mukati memoyo wenharaunda.
Iyo SHF - Philips Foundation Moyo Wellness Center imwe yenzvimbo nhatu dzinofambiswa neSHF inopa rubatsiro rwakanyanya-rubatsiro rwekudzoreredza moyo. Inowanikwa paFortune Center (190 Middle Road), iyo SHF - Philips Foundation Heart Wellness Center yakanakira varwere vemoyo uye vanhu vari panjodzi kuti vawane michina yekuchengeta inodiwa uye nyanzvi dzehutano kuchengetedza hutano hwemoyo yavo. Pakati, vanhu vachapinda chirongwa cheMoyo Wellness Programme, chirongwa chakarongeka cheChikamu 3 uye 4 chirongwa chekuvandudza moyo, apo nyanzvi dzehutano dzakasiyana siyana dzeSHF dzichapa gwara mumakirasi ekurovedza muviri, kuraira kwekudya, uye dzidzo yehupenyu hwehupenyu hwese-hutano - zvese izvo zvakakosha pamhedzisiro yemurwere. SHF inotsigira vanhu vangangosvika zviuru zviviri nemazana mashanu panzvimbo dzayo nhatu, idzo mazana matanhatu neshanu dziri paFortune Center.
Kupihwa kwechirongwa chekuvandudza moyo kuFortune Center kunonyanya kukosha mukuvandudza kuwanikwa kwekutarisira vanhu vakwegura, avo vanowanzo famba zvishoma uye vanotapukirwa nechiitiko chechipiri chemoyo. Mari inoitwa nePhilips Foundation ichabatsirawo kuchengetedza mari yekudzorera moyo yakadzikira kuti nhengo dzideredze zvimwe zvipingamupinyi zvazvino izvo zvinotadzisa kuwana rubatsiro uye kuvabatsira kutevedzera chirongwa chavo chekuvandudza.
Dzidzo uye kuisa chivimbo chekuita zvinhu zvakare zvakakosha zvekudyidzana uku. The Lancet Public Health yakaona kuti nhevedzano yekupindira kwehutano hweveruzhinji muSingapore yakawedzera mukana wekudzoreredzwa kwemoyo (CPR) neavo vakamira panguva yekubuda kunze kwechipatara kusungwa kwemoyo (OHCA) kanenge kasere, uye huwandu hwekupona hunopfuura kaviri, zvichisimbisa kukosha kupindira kwakadaro kwekuvandudza OHCA mhedzisiro.
Kudyidzana uku kuchaonawo matunhu makumi maviri muSingapore ane otomatiki ekunze defibrillators (Philips HeartStart AEDs) uye 20 vanhu vakadzidziswa muCPR + AED kwegore rimwe kuvaka nharaunda dzakagadzirira uye dzakasimba dzakashongedzerwa zviri nani kubata nezviitiko zvemoyo.